Maxay gabadhani halka milyan ee dollar kaga heshay shirkadda Uber? | Xaysimo
Home War Maxay gabadhani halka milyan ee dollar kaga heshay shirkadda Uber?
Maxay gabadhani halka milyan ee dollar kaga heshay shirkadda Uber?
Mid ka mid ah darawallada ayaa la sheegay in uu soo gaabiyey safarkeedii ka dib markii ay si been ah ugu sheegay in ay timid meeshii ay u socotey.
Garqaade madaxbanaan ayaa xukumay Uber wadayaasheeda inay si sharci daro ah ku takooreen iyaga oo u eegaya xaaladdeeda darteed.